Honor Waterplay 8, ithebhulethi enganyangekiyo ngamanzi ngexabiso elingenakubethwa | I-Androidsis
Honor Waterplay 8, ithebhulethi enganyangekiyo ngamanzi ngexabiso elingenakubethwa
UNerea Pereira | | Izaziso, Amacwecwe e-Android
Imbeko ibhengeze ngale ntsasa kwi-pukwazisa ngefowuni yakho entsha yeMagic 2, I-smartphone ebonakalayo ngaphandle kwekhamera yayo. Kwaye ngoku sikulethela enye into entsha, i Ithebhulethi entsha Honor Waterplay 8, Inguqu encinci yento ehloniphekileyo ekhutshwe kunyaka ophelileyo, ithebhulethi ye-Honor Waterplay, kodwa inezimanga ezinomdla kakhulu.
Esi sixhobo sitsha sivela kwinkampani esekwe eShenzhen sinezinto ezigqibeleleyo: 8 intshi IPS LCD screen, kumqhubekekisi Kirin 659 kunye nekhamera ephindwe kabini. Iya kuba sisiqinisekiso se-IP67, ke siyazi ukuba iyamelana namanzi nothuli. Okokugqibela, iya kuthengiswa kwiinguqulelo ezintathu ezahlukeneyo, ngokunxulumene nememori kunye nokunxibelelana.
Iimpawu zale Honor Waterplay 8, ithebhulethi entsha enexabiso eliphantsi
Phakathi kweempawu ezichazwe apha ngasentla, i-Honor Waterplay entsha ye-8 itafile inyusa a Iphaneli ye-IPS LCD efezekisa isisombululo see-pixels ze-1920 × 1200 Ukufikelela kubuninzi be-dpi engama-283 kunye nokubonelela ngomlinganiso omkhulu: isikrini sayo sihlala ipesenti ye-74.13 ngaphambili, kwaye apha ngezantsi sinokufumana, ewe, isixhobo sokujonga iminwe.
Ukuqhubeka, ine-processor engundoqo ye-Kirin 659, njengoko ngo-Okthobha kunyaka ophelileyo, yeyona modeli inkulu yasungulwa yi-Honor, kwaye le processor ihamba kunye IMali T830-MP2 GPU, 4 GB ye-RAM kunye neenguqulelo ezintathu ezahlukeneyo zokugcina kwangaphakathi, i-64GB, i-128GB, kunye ne-256GB. Ngokumalunga nesoftware, ibekwe kwinkqubo yokusebenza I-Android 8.0 Oreo, kwinkangeleko yomsebenzisi yesiko EMUI 8.0.
Ukongeza, i-Honor tablet entsha ixhasa iteknoloji yeGPU Turbo, Ukuyivumela ukuba inyuse kakhulu ukusebenza kwemizobo ngeepesenti ezingama-60, kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kwe-SoC ngeepesenti ezingama-30. Ngokumalunga neempawu zokufota, iNhlonipho yayifuna ukubala kwi-t yayo entshaAblet enegumbi eliphindwe kabini ngasemva kwesixhobo, kunye ne-13 kunye ne-5 ye-megapixel sensors ngokwahlukeneyo, oku kusenza sicinge ukuba ezi ziikhamera ezinesakhono esininzi, esingaqhelekanga kwitafile. Ikhamera yangaphambili iya kuba nefayile ye- Inzwa ye-8 megapixel ene-f / 2.0 ukuvula.
Phakathi kwezinye izinto ezenza le intsha ithebhulethi enexabiso eliphantsi Imbeko, ukongeza kwinqanaba le-IP67 lokuchasana namanzi kunye nothuli, sifumana iIzithethi ezibini zikaHarman Kardon, Banikela ngesandi sestiriyo, ibhetri eyi-5.100 mAh exhasa i-9V 2A yokutshaja ngokukhawuleza kunye nokukhethwa kokunxibelelana okubanzi: I-WiFi ac, ukhetho lwe-LTE, iBluetooth 4.2 GPS, i-GLONASS, i-USB Type-C kunye ne-USB OTG.
Okwangoku siyayazi loo nto ukumiliselwa kwayo kuya kwenzeka nge-6 kaNovemba e-China, apho iinguqulelo ezintathu eziza kubakho ziya kuboniswa. Okwangoku sinokulinda kuphela ukubona ukuba i-Honor iyakuyazisa le thebhulethi kwintengiso yamanye amazwe.
Honor Waterplay 8 64 GB WiFi: 1.499 yuan (malunga ne-189 euro ukuyitshintsha).
Honor Waterplay 8 64GB WiFi + LTE: 1.799 yuan (malunga ne-229 euro ukutshintsha).
Honor Waterplay 8 128GB WiFi: 1.899 yuan (malunga ne-240 euro ukuyitshintsha).
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Amacwecwe e-Android » Honor Waterplay 8, ithebhulethi enganyangekiyo ngamanzi ngexabiso elingenakubethwa
I-Energizer E500S isungula eYurophu nge-Android Go ngaphantsi kwee-euro ezingama-100
Ukuthelekiswa kweentloko ze-TWS